ब्राजिलका डाक्टरले मृत महिलाको गर्भाशय प्रत्यारोपण गरेर जन्माए बच्चा | Kattwal.com
मङ्लबार, बैशाख ७, २०७८
ब्राजिलका डाक्टरले मृत महिलाको गर्भाशय प्रत्यारोपण गरेर जन्माए बच्चा
एजेन्सी– ब्राजिलका डाक्टरले एउटा ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् । मेडिकल इतिहासमा पहिलोपल्ट उनीहरु एक मृत महिलाको गर्भाशय प्रत्यारोपण गरेर बच्चा जन्माउन सफल भएका छन् । यसभन्दा पहिला पनि मृत महिलाको गर्भाशय प्रत्यारोपण गरेर बच्चा जन्माउने प्रयास भएको थियो तर सफलता हात परेको थिएन।
रोयटर्सका अनुसार उक्त रिसर्चको नेतृत्व गरिरहेका साओ पाउलो युनिभर्सिटीका डाक्टर डनी इजेनबर्गका अनुसार मृत महिलाको गर्भाशय प्रत्यारोपण सन् २०१६ सेप्टेम्बरमा गरिएको थियो । जुन महिलामा यो गर्भाशय प्रत्यारोपण गरिएको थियो, त्यो समय उनको उमेर ३२ वर्ष थियो । ती महिला ‘मेयर–रोकिटानस्की–कुस्टर–हाउसर सिन्ड्रोम’का कारण गर्भाशय बिहीन जन्मिकएकी थिइन्।
सन् २०१७ मै यसरी बच्चा जन्माउन डाक्टरहरु सफल भएपनि विश्व चर्चित मेडिकल जर्नल द ल्यानसेटमा यो भर्खरै प्रकाशित भएको हो।
उनका अनुसार डोनर ९मृत महिला०को गर्भाशय भेन्ससँग जोडियो । आर्टरिज, लिगामेन्ट्स र भेजनाइनल क्यानलको पनि लिंक गरियो।
गर्भाशय दान दिने महिलाको मृत्यु हुँदा ४५ वर्षकी थिइन् । उनको मृत्यु हृदयाघातबाट भएको थियो । उनका तीन सन्तान थिए।
चेक गणरज्य, टर्की र अमेरिकामा मृत डोनरको गर्भाशय उपयोग गर्ने १० प्रयास असफल भइसकेका छन्।
डाक्टरका अनुसार यसरी सन्तान पाएकी महिला निकै खुशी छिन् । उनी आफूकहाँ आफ्नी छोरी देखाउन ल्याइरहन्छिन्।
गत वर्ष उनले छोरी पाएकी हुन् । डाक्टरका अनुसार गर्भाशय प्रत्यारोपणको पाँच महिना पछि नै महिलाका सवै टेस्ट सामान्य आइरहेका थिए । उनको अल्ट्रासाउन्ड नर्मल थियो र महिनावारी पनि समयमै भइरहेको थियो । त्यसपछि महिलाले पहिले नै फ्रिज गरिएको अण्डा प्रत्यारोपणको पाँच महिनामा इम्प्लान्ट गरिन् । त्यसको १० दिनमै उनको गर्भाधान पक्का भयो।
जिवित डोनरबाट प्राप्त गर्भाशयका माध्यामबाट सफलतापूर्वक बच्चा जन्माउने सफलता सन् २०१४मै स्वीडेनका डाक्टरलाई मिलेको थियो । त्यसपछि १० भन्दा बढी बच्चा यसरी जन्मिसकेका छन्।
सम्भावित जिवित दाताका तुलनामा गर्भाशय प्रत्यारोपण गरेर सन्तान जन्माउन चाहने महिलाको सँख्या बढी छ । त्यसैले चिकित्सक मृत महिलाको गर्भाशय प्रयोग गर्न कोशिसमा लागेका थिए।
स्थानीय तहका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदै
बलात्कारका घटनामा आफन्त र चिनजानकै व्यक्ति बढी संलग्न
सवारी दुर्घटनामा ट्राफिक प्रहरीको मृत्यु
अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा शल्यक्रिया सेवा अवरुद्ध
अष्ट्रेलियामा सयौँ नेपाली विद्यार्थी समस्यामा, नेपालले थाल्यो समाधानको पहल
झूटो अफवाह फैलाउने कामैतविरुद्ध मुद्दा दर्ता
हलियाका पीडा : मुक्त भए तर उन्मुक्त भएनन्
चिकित्सक नहुँदा डोटीमा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्न समस्या
डोटीका दुई गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरे
आत्महत्या रोकथामका लागि मिडियाको भूमिका प्रभावकारी
आरोप लाग्ला भनेर कार्यक्रममा आए : मुख्यमन्त्री पौडेल
प्रदेश ७ मा उद्योग र पर्यटनका प्रशस्त सम्भा‍वना छन् : मन्त्री भट्ट
प्रदेशको समृद्धिका लागि कर तिर्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन
जनताका अपेक्षा अनुसार काम गर्दैछौ : नगर प्रमुख हमाल
सुन्दर नगर निर्माणका लागि काम गर्दैछु : नगर प्रमुख ऐर
घोडाघोडी नगरलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन गुरुयोजना बनाएका छौंः प्रमुख चौधरी
Tweets by katwaalkhabar
नेकपाको नेतृत्वप्रति असन्तृष्टि, यही गतिले गन्तव्यमा पुगिँदैन : नेता भट्ट
मुर्ति बनाउने व्यावसायमा लगानी कम-फाईदा धेरै
‘कार्यकर्ताको घरमा पस्न पाउँदिन, गोठमा बस्नुपर्छ’
समता मिडिया सेन्टर प्रा.लि.द्धारा संचालित अनलाइन पत्रिका
मुख्य कार्यालय : धनगढी,कैलाली ( सुदूरपश्चिम प्रदेश )
प्रधान सम्पादक मो.नं. ९८५८४३१२३९
ईमेल : katwaalkhabar@gmail.com
समाचारदाता : रमेश बादी (कैलाली) आकांक्षा पाल्पाली (कंचनपुर) सविना परियार (डोटी) बिक्रम भुल (बैतडी) करिश्मा बि.क.(बझांग) भारती नेपाली (अछाम) सुरेश तोलाङ्गी (डडेल्धुरा) शेर ब.सार्की (बाजुरा)
2021 . कट्‍‍वाल डटकममा सर्वाधिकार सुरक्षित